भारत, पाकिस्‍तान र चीन, सेनामा कसको कति छ दम ? हेर्नुहोस् !
पुष २५, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ, कुनै पनि देशलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि उसको सैन्य शक्तिको अहम भुमिका रहन्छ। यसैबीच हाम्रो दक्षिण एसियामा रहेका सैन्य बलका हिसावले तीन शक्तिशाली देश चिन, भारत र पाकिस्तान दुनियाँमै सैन्‍य ताकत दमदार भएका राष्ट्रका रुपमा गणना हुन्छन्।
प्राय: यी देशबीच आपसमा तुलना पनि हुने गर्छ। यद्यपी, यी तीनै देशको सैन्य क्षमतामा धेरै भिन्नता रहेको छ। आउनुहोस्, आज जानौं भारत, पाकिस्तान र चिन मध्ये कसको सेनामा छ कति दम…
भारतीय सेनाको ताकत:
इन्डियन आर्मीमा कुल १,३६२,५०० कर्मचारी रहेका छन् । भारतसँग यु्द्ध ट्याङ्क ४,४२६ रहेको छ। सैनिक वाहनको सङ्ख्या ३,१४७ रहेको छ । स्‍वचल‍ित हतियार १९०, तोपको सङ्ख्या ४,१५८ रहेको छ। रकेट प्रोजेक्‍टरको संख्‍या २६६ रहेको छ ।
भारतीय वायुसेनाको ताकत:
भारतीय सेनासँग लडाकू व‍िमान ५९०, हमलावर व‍िमान ८०४, ट्रांसपोटर्स ७०८, ट्रेनर एयरक्राफ्टको संख्‍या २५१ रहेको छ। । त्यसैगरी जम्मा हेलिकप्टरको ७२० छ भने हमलावर हेलिकप्टर १५ रहेका छन्।
भारतीय नौसेनाको ताकत:
भारतको नौ सेनामा २९५ जहाज रहेका छन् । त्यसैगरी व‍िमान वाहक पोत १, युद्ध पोत १४, व‍िध्‍वंसक ११, लडाकू जलपोत २२, पनडुब्‍बी १६, पेट्रोल क्राफ्ट १३९ र युद्ध पोत जहाज ४ ओटा रहेका छन् ।
भारतको परमाणु ताकत:
आधिकारिक रुपमा भारतले परमाणु ताकत बारे खासै सार्वजनिक गर्नेगरेको छैन । भारतसँग न्‍यूक्‍ल‍ियर हतियार यानी परमाणु हतियार १३० छन् । म‍िसाइलको न्‍यूनतम रेञ्ज (प्रहार गर्न सक्ने दुरी) करीब १५० क‍िलोमीटर रहेको छ । त्यहिँ अग्‍न‍िको रेञ्ज (प्रहार गर्न सक्ने दुरी) करीब ५,००० देखि ८,००० क‍िलोमीटर रहेको छ । सूर्या म‍िसाइलको रेञ्ज (प्रहार गर्न सक्ने दुरी) पनि करीब १६,००० किमि रहेको छ ।
पाक‍िस्‍तानको सैन्य ताकत:
पाक‍िस्‍तानमा सेनाको कुल संख्या ६३७,००० रहेको छ। त्यस्तै यु्द्ध ट्यांकको संख्‍या २१८२ छ । सैन्य वाहन २६०४ रहेका छन्। त्यसैगरि स्वचालित तोपको संख्‍या ३०७, तोपको संख्या १२४० रहेको छ । रकेट प्रोजेक्‍टरको संख्‍या १४४ रहेको छ।
पाक‍िस्‍तान वायुसेनाको ताकत:
पाक‍िस्‍तानसँग लडाकू व‍िमान ३२०, हमलावर व‍िमान ४१०, ट्रांसपोटर्स २९६, ट्रेनर एयरक्राफ्टको संख्‍या ४८६ रहेको छ । त्यसैगरी जम्मा हेलीकप्टरको संख्‍या ३५८ रहेको छ। त्यसैगरी हमलावर हेलीकप्टरको संख्‍या ४९ रहेको छ। पाक‍िस्‍तानी नौसेनाको ताकत:
पाक‍िस्‍तानको नौसेनामा १९७ ओटा जहाज रहेका छन्। जहाँ व‍िमान वाहक पोत ०, युद्ध पोत १०, व‍िध्‍वंसक ०, लडाकू जलपोत ०, पनडुब्‍बी ५ पेट्रोल क्राफ्ट ११ र युद्ध पोत जहाज ३ ओटा रहेका छन्।
चीनको सेनाको सिने ताकत कस्तो छ ?
चीनमा सेनाको कुल संख्या २,६९३,००० रहेको छ । त्यसैगरी उसँग यु्द्ध ट्यांकको सङ्ख्या ७७१७ छ। सैन्य वाहनको संख्या ९००० रहेको छ। स्‍वचल‍ित तोपको संख्‍या २००० , तोप ६२४६ रहेको छ। रकेट प्रोजेक्‍टरको संख्‍या २०५० रहेको छ।
चीनको वायुसेनाको ताकत:
चीनसँग लडाकू व‍िमान ११२५, हमलावर व‍िमान १५२७, ट्रांसपोटर्स ७२२, ट्रेनर एयरक्राफ्टको संख्‍या ३५३ रहेको छ । जहाँ जम्मा हेलिकप्टरको संख्‍या ९८५ हमलावर हेलिकप्टरको संख्‍या २८१ रहेको छ ।
चीनको नौसेनाको ताकत:
चीनसँग नौसेनामा ७१४ जहाज रहेका छन्। त्यहीँ व‍िमान वाहक पोत १, युद्ध पोत ५०, व‍िध्‍वंसक २९, लडाकू जलपोत ३५, पनडुब्‍बी ७३, पेट्रोल क्राफ्ट २२० र युद्ध पोत जहाजको सङ्ख्या २९ रहेको छ।
-ग्लोबल फायर पावर डट कमले तयार परेको तथ्याँकको आधारमा !
प्रकाशित : बुधबार, पुष २५, २०७५१७:०६
अण्डर वर्ल्ड डन दाऊद इब्राहिमलाई ठूलो झड्का ! भाइले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न दाऊद असमर्थ !
३४ मिनेट अगाडि PARWATI
३७ मिनेट अगाडि PARWATI
३८ मिनेट अगाडि PARWATI
४० मिनेट अगाडि PARWATI
४२ मिनेट अगाडि PARWATI
४३ मिनेट अगाडि PARWATI
५६ मिनेट अगाडि PARWATI